Events | RSSD
Weather Advisory (မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်)
An endeavour to mainstream and improve the Rice Seed Sector in the Ayeyarwady Delta with reference to Seed farms, seed business, quality assurance and seed sector coordination. Hasadedicated multi-country expert team facilitating the implementation of the project philosophy.
ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်းရှိ မျိုးသန့်ခြံများ၊ မျိုးစေ့စီးပွားကဏ္ဍ၊ အရည်အသွေး အာမခံမှုနှင့် မျိုးစေ့ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ စပါးမျိုးစေ့ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Address: Welthungerhilfe Pathein Office
No. (63), Kwin Tan Street, Ward (2), Pathein, Ayeyarwady Region, Myanmar
ဖုန်း - ၀၉ ၄၀၄၂၃၀၈၃၄
လိပ်စာ - WHH ပုသိမ်ရုံး
အမှတ် (၆၃)၊ ကွင်းတန်းလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်
RSSD © 2020